ဂဇက်ကွန်းဖရန့် ၃ ကျင်းပမယ့် SHANTI Restaurant သို့ ဂန္ဓာရီ လမ်းညွှန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂဇက်ကွန်းဖရန့် ၃ ကျင်းပမယ့် SHANTI Restaurant သို့ ဂန္ဓာရီ လမ်းညွှန်
ဂဇက်ကွန်းဖရန့် ၃ ကျင်းပမယ့် SHANTI Restaurant သို့ ဂန္ဓာရီ လမ်းညွှန်
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jan 10, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography, Travel | 10 comments
Shanti လမ်းညွှန် တတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်းဖရန့်သို့
မန်းလေးဂဇက် (သဂျီးကတော့ မြန်မာဂဇက်လို့ အင်ပရု လုပ်ထားပေမယ့် ဂလိုပဲခေါ်မယ်) အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ တတိယ အကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲ ကို ယခင် ဒုတိယ အကြိမ် ကျင်းပထားတဲ့ SHANTI စားသောက်ဆိုင် မှာပဲ လုပ်ဖြစ်မယ်ပြောတာကြောင့် လမ်းညွှန်လေးကို တတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ဝေလိုက်ပါ ကြောင်း.. ယခင်က မလာဖူးတဲ့ ညီအကို မောင်နှမနများ ဒီလမ်းညွှန်က ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ကျနော်ကတော့ လေဒီအုပ် နဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကိုလိုက်ပါ သွားရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီတခေါက်လဲ မလာနိုင်တော့ပါ။ ဦးမိုက်နဲ့ ဦးပေ အနော့ကို ခွေးလွှတ်ပါနော့။
တည်နေရာက လတ်/လောင် 16.795944,96.169916 မှာရှိပါတယ်.. google map မှာ ဘယ်လိုရှာရမလဲ မသိရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ
Taxi နဲ့လာမယ်ဆိုရင် မျှော်စင်ကျွန်း လို့ပြောပါ..
ဗဟန်း ၃ လမ်းဘက်/သုဝဏဘက် ကဆိုရင်၄၆ ဟိုင်းလတ် (အ၀ါ/အစိမ်း). စီးပြီး မျှော်စဉ်ကျွန်းလို့ပြောပါ..
မြောက်ဥက်ကလာ ဘက်ကဆိုရင် ၁၀၃ တောင်းအေ့ ဂိတ်ဆုံးစီးပါ.. ဂိတ်ဆုံးမှာ ဆင်းပြီး လမ်းပြန်လျှောက်ရမယ်..
ရန်ကင်းက လာတဲ့ ၃၃ ကားကြီးဆိုရင် အလုပ်သမားဆေးရုံမှတ်တိုင် ဆင်းပြီး ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်ပါ. ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာမွန်ဈေး မှတ်တိုင် ဆင်းပြီး နောက်ကို လျှောက်ပါ.. အဲဒီက အနီးဆုံးကိုရောက်တဲ့ ကားတွေပါ..
အဖြူလုံးလေးတွေက တာမွေဘက်က ၀င်ရင် တွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းများ ဖြစ်ပြီး မျှား အနက်လုံးလေးတွေ က သိမ်ဖြူဘက်က ၀င်ရင်တွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်.. ပုံတွေမှာ နံပါတ်တပ်ထားပေး ပြီး နံပါတ်တွေကို မြေပုံပေါ်မှာ ပြန် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်..ပုံ နာမည်တွေမှာ L1 ပုံဆိုရင် မြေပုံပေါ်က L1 လို့ပြထားတဲ့ နေရာမှ ရိုက်ထားတာပါ.. L နဲ့စတာတွေက သိမ်ဖြူဘက်က ၀င်တာဖြစ်ပြီး R1, R2.. စတာတွေ ကတော့ တာမွေဘက်က ၀င်တဲ့ လမ်းကြောင်းပါ..
L4 ချယ်ရီ FM
L6 ဘယ်ဖက်က p3 ညာဖက်က shanti
L8 SHANTI က မိုးလုံလေမလုံခန်းမ
L9 ဒီရွှေအိုးကြီးတွေကို တွေ့အောင်အရင်ရှာ
R9 ဒေါင့်တည့်တည့်မှာပါ.. ဘယ်ဖက်ချမ်းမှာ ၀ိုင်းပြထားတာက ရွှေအိုးကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး.. ညာဖက် မျှော်စင်ကျွန်းဝင်တဲ့လမ်းရဲ့ ညာဖက်မှာ ပါ
ကျနော်တော့..ဒီတစ်ပွဲ… မလာနိုင်တော့မှာ..ကျိန်းသေနေပြီမို့ ..
သွားနိုင်သူတွေ ပျော်နေတဲ့ သတင်း..စောင့်မျှော်ကြည့်နူးရုံသာ….
သန်းခရု ဘဲယီးမက်ခ်ျ ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ..
ညက်စိ မှိတ်ပီး တွားမယ်ဆိုယင်ဂေါ
ဘိုတွားရမလဲ မတိဘူး ခည ..
မှတ်တော့သွားတာပဲ ရောက်မှညက်ချိလည်တွားရင် ဖုန်းခေါ်လိုက်မှာဘဲ။ ရောက်ရာအရပ်ကို လာကြိုတော် မူဂျဘာဗျို့။
မျက်စေ့လည်နေရင် အသံနားထောင်ပြီး လာရင်ရတယ်။
ရွာသူားတွေဆုံတဲ့ပွဲမို့ အသံတွေ မိုးထိညံနေလောက်တယ်။
မင်းတော်တယ်မောင်အုပ်… ပြန်လာရင် ဖောက်စူး ပေးမယ်…
အရင်တုန်းကတော့ မလာဖူးပေမယ့် ဒီလမ်းညွှန်လေးကို မျက်စိထဲ ခုထိ မှတ်ထားနေမိဆဲပါ ဆွာအုပ်… ပြန်လာရင် လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့နော်။
အံဇာ မျက်စိမှိတ်လာရင် လေးဖက်ကုန်းလာပါ
ကတိုက် ဖောက်စူးမလိုဘူး ကျတော့မှာဖောက်တံချိတယ်
ခုတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ အအေးဒဏ်ကို ဘီယာတစ်ခွက်ထဲနဲ့ ကျော်ဖြတ်နေရတယ် နက်ဖြန် မန်းလေးကနေ ပုဂံ ကိုသွားမယ် ပြီးရင် ချင်းပြည်ခရီး ဆက်မယ် ဗျို့